Converter – Unicode Today
NLP Converter အသုံးပြုနည်း
မေး-ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ အရင်ကဇော်ဂျီဖောင့်၊ဝင်းဖောင့်၊မြန်မာ ၁ ဖောင့်တို့နဲ့ Word တို့ Excel တို့ကို စာရိုက်ခဲ့တယ်။အခုမြန်မာစာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ၃ ၊ပြည်ထောင်စု စတဲ့ ဖောင့်တွေနဲ့ ပြန်ပြီးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အစကနေ အဆုံးစာပြန်ရိုက်ဖို့ကလည်း အချိန်တွေပေးရမှာဆိုတော့ ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ပြောင်းလို့မရဘူးလား??? ဖြေ-ရပါတယ်။ဒီ့အတွတ် NLP Converter ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးရှိပါတယ်။ဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ဆို အချိန်မကုန် လူမပင်ပန်း တော့ပါဘူး။ NLP Converter ကို အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ NLP Converter ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် ထည့်သွင်းပုံ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ msi ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီး run လိုက်ပါ။ Next ကိုပဲဆက်တိုက်နှိပ်သွားပါ။ဘာမှပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူး။ အသုံးပြုပုံ ထည့်သွင်းပြီး‌သော NLP Converter ဆော့ဝဲလ် ကိုဖွင့်ပါ။ Browse ခလုပ်မှတဆင့် မိမိပြောင်းလိုတဲ့ဖိုင်ကိုရွေးဖို့ Files of […]
Word နှင့် Excel တွင် Unicode plugin အသုံးပြုနည်း
Myanmar Unicode plugin for MS Excel Excel တွင် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ရိုးရာအတိုင်း အက္ခရာစဉ် နိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်သည်။ Myanmar NLP team မှ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ Myanmar Unicode plugin for MS Excel ရယူရန် Myanmar Unicode plugin for MS Word Microsoft Word တွင် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်သည်။ Myanmar NLP team မှ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အခမဲ့ […]
KaNaung Converter အသုံးပြုနည်း
Step (1) KaNaung Converter ကိုအောက်တွင်ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။ KaNaungConverter_Windows ရယူရန် Step (2) ဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော zipဖိုင်ကိုဖြည်ချပြီး ဖွင့်လိုက်ပါကအောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ရမည်။ Step (3) KaNaung exe ကိုနှစ်ချက်နိုပ်၍ဖွင့်ပါ။ Step (4) (ဇော်ဂျီဖောင့် မှ ယူနီကုဒ်ဖောင့် သို့ )ပြောင်းလဲလိုပါက ဘယ်ဖက်တွင် Zawgyi ကိုရွေးပေးပါ။ ညာဖက်တွင် Myanmar3ဖောင့်ကိုရွေး‌ပေးပါ။ Step (5) မိမိပြောင်းလဲလိုသည့် Zawgyi font စာကို copy ကူးယူပြီး Paste ချပါ။ Step (6) အောက်ခြေရှိ Convert>>> ခလုပ်ကိုနိုပ်လိုက်ပါကအောက်ပါအတိုင်း Unicode ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရမည်။ KaNaung−Converter Tutorial PDF ဖိုင်ရယူရန်
Myanmar2 မှ Myanmar3 သို့ Converter အသုံးပြုနည်း
Myanmar2 ဖြင့်ရေးသားထားသည်များကို Myanmar3သို့ပြောင်းလဲပေးသည့် Converter တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။Myanmar2 ဖောင့်ဖြင့် ရေးသားထားသော စာများ၊ ဖိုင်များ ကို Myanmar3 ဖောင့်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုရာတွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ် နေသည်များကို Myanmar3 ဖောင့် format ပုံစံအတိုင်း မှန်ကန်စေရန် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ မြန်မာ ၃ ဖောင့် အမှန်ပြင်ပေးသော software converter ဖြစ်ပါသည်။ Myanmar2 CorrectionSetup ရယူရန် ထည့်သွင်းပုံ အရင်ဆုံး Myanmar2CorrectionSetup ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလ် ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီး run လိုက်ပါ။ Next ကိုပဲဆက်တိုက်နှိပ်သွားပါ။ဘာမှပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူး။ အသုံးပြုပုံ ထည့်သွင်းပြီး‌သော Myanmar2Correction ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလ် ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Browse ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးရင်အောက်ကပုံအတိုင်း File name ဘေးနားက ဖိုင်အမျိုးအစားမှာ […]
PK Converter အသုံးပြုနည်း
ကွန်ပြူတာအတွက်ကတော့ Text Converter တင် မကဘဲ စုစုပေါင်း သုံးမျိုးပေါင်းပေးထားပါတယ်။ 1. Text Converter 2. Filename Converter 3. MP3 Tag Converter ၁။ အတွက်ကတော့ ပြောဖို့ မလိုလောက်တော့ပါဘူး။ APK နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ မပါတာဆိုလို့ Image ဖိုင် ပြောင်းတာပါပဲ။ ၂။ Folder လိုက် ရွေးပြီး Folder ထဲမှာ ပါသမျှ file တွေကော folder တွေကော Zawgyi ကနေ Unicode အဖြစ် အကုန် ပြောင်းခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ Auto detect ကို On ထားရင် ဇော်ဂျီလို့ ယူဆရတဲ့ ဖိုင်တွေပဲ ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ […]
Web Browser Extension များ Web browser extension ဆိုတာကတော့ Firefox,Chrome,Safari,…အစရှိတဲ့ web browser တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ web browser တွေရဲ့font converter extension တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇော်ဂျီနဲ့ရေးသားထားသည်များကိုယူနီကုဒ်အသုံးပြုသူများဖတ်ရှုနိုင်ရန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Firefox Browser အသုံးပြုသူများအောက်ဖော်ပြပါ browser extension များမှရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ပေးထားသောလင့်ကို firefox browser တွင် new tab ခေါ်၍ဝင်ရောက်ပါ။ထို့နောက် Add To Firefox ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။Browser ကိုပိတ်၍ပြန်လည်ဖွင့်လိုက်ပါ။Browser extension ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။(မှတ်ချက်=MUA Web Unicode Converter မှလွဲပြီးတခြား extension များသည် Firefox Quantum ဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။) MUA Web Unicode Converter by San Lin Naing [Firefox] […]